Dhonza Rurimi Rwangu, iko kushanda kwevhiki | IPhone nhau
Dhonza Rurimi Rwangu, uchidhonza rurimi rwe chameleon muapp yevhiki
Pablo Aparicio | | IPhone mitambo
Zvinotaridza kuti Apple yakatanga kuita kuti misoro yedu ipfungaire. Mushure mevhiki yataive naKing Rabbit sechishandiso chemahara, mutambo wataifanira kugadzirisa mapuzzle kuitira kuti tifambire mberi mukushanya kwedu, panguva ino kushandiswa kwevhiki ndiko Dhonza Rurimi Rwangu, zita rakasiyana kwazvo, asi iro rinozoitawo kuti tishamise kana tichida kuenda padanho rinotevera.
Iye protagonist we Dhonza Rurimi Rwangu ndiye chameleon Greg. Kana Om Nom achida zvihwitsi, rwizi urwu runofarira maputi. Kunyangwe akatumidza protagonist weKucheka Tambo, Dhonza Rurimi Rwangu harunei nazvo. Zvakanaka, hongu: isu tichafanirwa kutora dzinosvika nyeredzi nhatu asi, pachinzvimbo chekucheka tambo, mu yemahara app vhiki rino tinofanira kuzviisa. Zvakanaka, isu tinofanirwa kudhonza runyorwa rwerunyoka rurimi kunze.
Dhonza Rurimi Rwangu: Enda kumaputi!
Semazuva ese, iwo ekutanga nhanho dzeKudhonza Rurimi Rangu achashanda sedzidziso. Chatinofanira kuita mumutambo uyu ndechekuti rurimi rwe chameleon Greg inoita nzira inodiwa kuenda unganidza kana zvichibvira nyeredzi nhatu uye ipapo popcorn. Kuti tiite izvi, isu tichazendamira pane zvinotsigira izvo zvichatibatsira kutendeuka pazvinenge zvakakodzera. Asi, hongu, kwete zvese zvaizove zviri nyore kudaro.
Mushure mekupasa mashoma mashoma, ivo vanotanga kuoneka vamwe skewers izvo, zvine musoro, Greg anovenga. Kana rurimi rukabata skewer, isu tichafanirwa kutanga patsva. Kune rimwe divi, Greg ndiye chameleon, hongu, ane rurimi rurefu, futi, asi haruperi. Pachauya poindi apo isu tichaedza kuita kuti iwedzere uye isu hatizokwanise, saka isu tichafanirwa kurega izvozvo uye kutsvaga imwe nzira.
Kana ndichifanira kutaura chokwadi, ini ndaisaziva nezve kuvapo kwemutambo uyu kusvika paive nendege yemahara sekushandisa kwevhiki, asi ikozvino zvandaiyedza ndinofunga zvakakodzera. Zvirinani, uye sezvandinogara ndichitaura, unofanirwa tora mukana wekupihwa vhiki ino uye utore pasi paunenge uchikwanisa kuibatanidza neApple ID yako.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Dhonza Rurimi Rwangu, uchidhonza rurimi rwe chameleon muapp yevhiki
Brazil ndiyo nyika inodhura kwazvo kutenga iPhone, United States yakachipa kwazvo
Inomisikidza yeIOS (uye tvOS) inosvika vhezheni 4.2 uye inosanganisira inonakidza nhau